डा. अशेष ढुंगाना – Health Post Nepal
Posted in दमTagged डा. अशेष ढुंगाना, दमLeaveaComment on सिओपिडी दमबारे व्याप्त भ्रम चिर्नु पहिलो चुनौती
नेपालमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घरोग सिओपिडीका बिरामी दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । करिब ३४ लाख नेपाली सिओपिडी दमको सिकार भएको अध्ययनले देखाएको छ । सिओपिडी नेपालमा अकाल मृत्युको दोस्रो प्रमुख कारणका रुपमा रहेको छ, जब कि विश्वस्तरमा यो अकाल मृत्युको चौथो प्रमुख कारण हो । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययनअनुसार ११ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली सिओपिडी दमको सिकार भएको पाइएको छ । जसमध्ये १२ दशमलव ६ प्रतिशत पुरुष रहेको र ११ प्रतिशत महिला सिओपिडीले पीडित छन् । यसरी हेर्दा प्रत्येक १० नेपालीमध्ये १ मा सिओपिडी रोग छ ।
दीर्घकालीन श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगमा मुख्यतया श्वासप्रश्वासको प्रवाह कमजोर भई समस्या देखिने वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. अशेष ढुंगाना बताउँछन् । ‘विशेषतः यो समयक्रमसँगै बिग्रँदै जाने हुन्छ,’ डा. ढुंगाना भन्छन्, ‘समयमै रोग पहिचान हुन सकेमा यसको रोकथाम र उपचार हुन्छ ।’
डा. ढुंगानाका अनुसार सिओपिडी दमको प्रमुख कारण धूमपान हो । हाम्रो सहर तथा गाउँमा धूमपान गर्ने मानिसको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सामान्यतया धूमपान नगर्नेको फोक्सोमा रगतको प्रवाह नर्मल हुन्छ भने यो रातो रङको हुन्छ । धूमपान गर्ने मानिसको फोक्सो धुवाँका कण, धुवाँबाट निस्कने विभिन्न रसायन जम्मा भएपछि कालो रङको देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रत्येक ३ जनामध्ये १ जना (एकतिहाइ) ले धूमपान गर्दै आएका छन् या त विगतमा धूमपान गरेका थिए । हाल प्रत्येक ५ जनामध्ये एक (२०%) ले धूमपान गरिरहेका छन् ।
धूमपान सिओपिडीको मुख्य कारण भए पनि यसका अन्य कारण पनि छन् । बढ्दो सहरीकरण, वायु प्रदूषण पनि सिओपिडीका कारण हुन् । ग्रामीण भेगमा मुख्य रूपमा चुलोमा प्रयोग गरिने दाउरा, गुइँठा, पराललगायतबाट निस्कने धुवाँका कारण भान्सामा काम गर्ने महिलामा सिओपीडी दमको समस्या बढ्दै गएको छ । यसका साथै बढ्दो विकास निर्माणका कार्य, विभिन्न उद्योगबाट निस्कने धुवाँ, धुलोले वायुलाई प्रदूषित बनाइरहेका छन्, जसका कारण विशेषगरी त्यहाँ काम गर्ने मजदुर सबैभन्दा प्रभावित भइरहेका छन् । यद्यपि, यसको असर कामदारमा मात्र सीमित नभई सर्वसाधारणमा पनि काफी मात्रामा परेको छ ।
प्रतिवर्ष सिओपिडीका कारण ३१.७ लाखको जान्छ ज्यान, २५ करोड प्रभावित
विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा २५ करोड मानिस सिओपिडी दमबाट प्रभावित छन् । यसको वार्षिक मृत्युदर ३१.७ लाख रहेको छ, जुन कुल मृत्युको ६ प्रतिशत हो । हाल विश्वमा सिओपिडी अकाल मृत्युको चाथौ कारण हो, जुन सन् २०३० सम्ममा तेस्रो बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विश्वमा अकाल मृत्युको चौथो कारण रहेको सिओपिडीले नेपालमा भने दोस्रो स्थान लिएको छ । ९० प्रतिशत सिओपिडीबाट हुने मृत्यु नेपालजस्तै कम विकसित र अति कम विकसित मुलुकमा हुने गरेको छ । वायु प्रदूषण तथा धूमपान गर्ने मानिस बढेसँगै अकाल मृत्युमा सिओपिडीको स्थान पनि बढ्दै जाने डा. ढुंगाना बताउँछन् ।
नेपाल अनुसन्धान परिषद्ले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशवासी सिकार बन्दै आएका छन् । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कर्णालीमा सिओपिडीपीडितको संख्या २५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा १६.२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १४.३ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ११ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ९.५ र प्रदेश १ र गण्डकीमा प्रदेशमा ६ प्रतिशत जनतामा सिओपिडी रोग भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
नसर्ने रोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि वार्षिक ८ करोड खर्च
सरकारले नसर्ने रोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि वार्षिक ८ करोड खर्च गर्दै आएको छ । प्रदेशअनुसार १ करोडका दरले ७ करोड र केन्द्रमा ९५ लाख विनियोजन भएको स्वास्थ्यसेवा विभागले जनाएको छ । यद्यपि, मुटुरोग, क्यान्सर, सिओपिडी दमलगायत नसर्ने रोगको फैलावट भने दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । खासगरी नसर्ने रोग मानिसको जीवनशैली र आनिबानीसित सम्बन्धित हुने भएकाले त्यसमा आम रुपमा सुधार नआएसम्म रोग न्यूनीकरण चुनौतीकै रुपमा रहने विज्ञहरुको भनाइ छ । विज्ञहरुले नसर्ने रोगबारे चेतनाविस्तार नै अपर्याप्त भएको बताइरहँदा सरकारी कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
३४ लाख नेपाली सिओपिडीले ग्रस्त, तर ५० हजार मात्र सही उपचारको दायरामा
करिब ३४ लाख नेपालीमा सिओपीडी रोग रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये सही उपचारपद्धतिको अवलम्बन गर्नेको संख्या ५० हजार मात्र रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सिओपिडीको उपचारपद्धतिबारे जनमानसमा व्याप्त भ्रमका कारण बिरामीको ठूलो हिस्सा उपचारपद्धतिमा समेटिन नसकेको विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको भनाइ छ । डा. ढुंगानाका अनुसार सिओपिडीको सबैभन्दा प्रभावकारी उपचारपद्धति इन्हेलर हो । ‘इन्हेलर पद्धतिमा श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सीधै फोक्सोमा औषधि पुर्याइन्छ,’ डा. ढुंगाना भन्छन्, ‘कुल बिरामीको ३ प्रतिशत मात्रै यो उपचारपद्धतिमा आबद्ध छन् ।’
यी भ्रमका कारण सिओपिडीका बिरामी उपचारको दायरामा छैनन्
सिओपिडीबारे समाजमा केही भ्रम व्याप्त रहेको र त्यसलाई चिर्नु अत्यावश्यक रहेको डा. ढुंगाना बताउँछन् । सिओपिडीबारे नेपाली समाजमा व्याप्त भ्रम र यथार्थबारे डा. ढुंगाना भन्छन्–
भ्रम : सिओपिडी रोग धेरै मानिसलाई हुँदैन ।
यथार्थ : धूमपान र प्रदूषणको चपेटामा आउने तथा वंशानुगत जोखिम भएका जोकोहीलाई सिओपिडी रोग हुन सक्छ । नेपालमा प्रत्येक १० जनामध्ये १ मा सिओपिडी छ र यो संख्या केही वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने अनुमान छ ।
भ्रम : सिओपिडी दम धूमपान गर्नेलाई मात्र हुन्छ ।
यथार्थ : सिओपिडी धूमपान गर्ने मानिसलाई धेरै हुने भए पनि वायु प्रदूषण तथा वंशानुगत जोखिम भएका मानिसमा पनि हुने गर्छ ।
भ्रम : सिओपिडीका बिरामीले व्यायाम गर्नुहुँदैन ।
यथार्थ : सिओपिडी दमका बिरामीले नियमित व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ । एक स्वस्थ वा सामान्य मानिससरह दमका बिरामीलाई पनि व्यायाम आवश्यक हुन्छ ।
भ्रम : अन्तिम अवस्था नआएसम्म दमको तान्ने औषधि इन्हेलरको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
यथार्थ : यो गलत हो । सिओपिडी दमको सबैभन्दा प्रभावकारी उपचारपद्धति नै इन्हेलर हो । त्यसैले दमका रोगीले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नियमित रूपमा इन्हेलरको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
भ्रम : उमेर बढ्दै गएपछि स्वाँ–स्वाँ हुनु सामान्य हो ।
यथार्थ : स्वाँ–स्वाँ हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया नभएर सिओपिडीको पहिलो लक्षण हो ।
सुरुवाती चरणमा उपचार गरेको खण्डमा यो रोग निको हुने डा. ढुंगानाको भनाइ छ । ‘सिओपिडी रोगको पूर्ण उपचार सम्भव छैन, तर सही उपचारपद्धति अपनाएको खण्डमा आममानिसको जस्तै समान्य जीवन जिउन सकिन्छ,’ डा. ढुंगाना भन्छन्, ‘सिओपिडीको उपचार धेरै मानिसलाई जीवनभर गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर नियमित उपचार गरेको खण्डमा उनीहरुले सामान्य जीवनयापन गर्न सक्छन् ।’
विश्व सिओपिडी दिवसका अवसरमा बुधबार नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी रोगबाट बच्ने उपायबारे चेतनाविस्तार गर्ने प्रयास गरिएको छ । स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. ढुंगानालगायत विज्ञहरुले नेपालमा सिओपिडीको अवस्था, रोकथाम तथा चुनौतीबारे अनुसन्धानात्मक प्रस्तुति दिएका छन् । सबै प्रस्तोताको जोड धूमपान र बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रणका साथै सिओपिडीको उपचारपद्धतिबारे व्याप्त भ्रम चिर्न सरकारीस्तरबाट व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा थियो ।
Posted in दम, मुख्य खबर, रोगTagged डा. अशेष ढुंगाना, दम, सिओपिडीLeaveaComment on ३४ लाख नेपालीमा सिओपिडी दम तर ५० हजार मात्र उपचारको दायरामा, अकाल मृत्युको दोस्रो कारण
Posted in उपचार, दमTagged डा. अशेष ढुंगाना, दमLeaveaComment on दम : समयमा उपचार नगर्नाले आजीवन औषधि